I-OEM & ODM Intwasahlobo Intengo Yentengo Yombhede | Rayson
Idizayini eyingqayizivele enenhlanganisela ephelele ye-gel kanye ne-state-art memory foam - etholakala ngezinqumo ezintathu zokuthola ukunethezeka ukuze uqinisekise ukuthi uzothola okulungile kuwe. Noma ngabe uyayithanda i-SOFTER, Medium noma i-firmer, umatilasi othule ubusuku kufaneleka ngokuphelele indlela olala ngayo.
Umatilasi uqhamuke ngobuhlakani, amabhokisi abhalwe phansi futhi kulula ukuwaphatha. Lapho usunqume ngomatisi obuthule buthule kuwe, ungahlala emuva, uphumule bese ulinda ukuthi ifike. Ngeke ulinde isikhathi eside nesenkonzo yethu yokulethwa ngokushesha.
Setha eminyakeni edlule, iRayyson ingumenzi ochwepheshe futhi futhi umphakeli onamakhono aqinile ekukhiqizeni, ekwakheni, kanye ne-R & D. Intengo yombhede yentwasahlobo inikele kakhulu ekuthuthukisweni komkhiqizo kanye nokwenza ngcono kwekhwalithi yesevisi, sesisungule idumela eliphakeme ezimakethe. Sithembisa ukuhlinzeka wonke amakhasimende emhlabeni wonke ngensizakalo esheshayo nezobuchwepheshe emboza ukuthengisa kwangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa, nangemva kokuthengisa. Akunandaba ukuthi ukuphi noma yiliphi ibhizinisi olibandakanyekile kulo, sithanda ukukusiza ubhekane nanoma yiluphi udaba. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi ngentengo yethu yombhede omusha wentwasahlobo yentwasahlobo noma inkampani yethu, zizwe ukhululekile ukuxhumana ne-US.rayson uhlukaniswe ngemininingwane yokuklama eyinkimbinkimbi. Yonke imininingwane, kufaka phakathi ukuvumelana kombala, imigqa (imishini, ukuvuleka, ama-pleats, amathayela), ukwakheka (okuqinile, okuqondile, isiyingi), futhi umuzwa wokuthakazelisa ngobuhle) unakekelwa kakhulu.